China 6㎡ finday namboarina sy mpanamboatra tranofiara | JCT
JCT 6m2 mobile LED trailer （Model: E-F6） dia vokatra vaovao avy amina andian-tsarimihetsika natomboky ny orinasa JingChuan tamin'ny taona 2018. Miorina amin'ny tranokala E-F4 tarihan'ny finday mitarika, ny E-F6 dia manampy ny velaran'ny efijery LED ary manao ny haben'ny efijery 3200 mm x 1920 mm. Fa raha ampitahaina amin'ny vokatra hafa amin'ny andian-tsarimihetsika dia manana habe efijery somary kely kokoa izy io.
JCT 6m2tranofiara LED finday （Model: E-F6） dia vokatra vaovao avy amin'ny andian-tsarimihetsika natomboky ny orinasa JingChuan tamin'ny taona 2018. Miorina amin'ny tranofiara mitondra ny lohateny E-F4, i E-F6 dia manampy ny velaran'ny efijery LED ary manao ny haben'ny efijery 3200 mm x 1920 mm. Fa raha ampitahaina amin'ny vokatra hafa amin'ny andian-tsarimihetsika dia manana habe efijery somary kely kokoa izy io. Ka ny 6m2 ny tranofiara LED finday dia manaitra ny sary hita maso ary mora kokoa ny mijanona sy mamadika toerana ipetrahana amin'ny toe-javatra feno olona miaraka amin'izay.
Orinasa JCT tsy miankina manangana andry mpitari-dalana mihodina hanambatra ny rafitra mpanohana sy ny fiakarana hydraulic sy ny rafitra fihodinana miaraka izay mahatsapa ny fihodinan'ny diplaoma 360 tsy misy zoro maty, manatsara ny vokatry ny fifandraisana, ary mety indrindra amin'ny tanàna, fivoriambe, fangatahana fotoana feno olona toy ny kianja fanatanjahantena ivelany .
Fisehoana lamaody, teknolojia mavitrika
Ny 6m2tranofiara LED finday （Model ： E-F6） nanova ny famolavolana nentim-paharazana ny vokatra teo aloha ho endrika tsy misy rafitra miaraka amin'ny tsipika madio sy madio ary ny sisiny maranitra, hita taratra tanteraka ny hevitry ny siansa, ny teknolojia ary ny fanavaozana ny toetr'andro. Izy io dia mety indrindra amin'ny fanaraha-maso ny fifamoivoizana, fampisehoana, fampisehoana lamaody, fanombohana fiara ary hetsika hafa ho an'ny fironana lamaody na teknolojia na vokatra manapotika.
Rafitra fampiakarana hydraulic, azo antoka sy milamina
6m2Ny tranofiara mandeha amin'ny alàlan'ny finday an'ny masoandro dia mampiasa rafitra fananganana hydraulic nafarana miaraka amin'ny haavon'ny dia 1.3m ary azo antoka sy milamina izy io. Ny haavon'ny efijery LED dia azo ovaina mifanaraka amin'ny filan'ny tontolo iainana mba hahazoana antoka fa ny mpihaino dia mahazo ny zoro fijery tsara indrindra.
Famolavolana fisotroana tsy manam-paharoa
6m2 tranofiara tarihin'ny finday dia miaraka amin'ny fitaovana inertial sy frein-tanana, ary azo sintonina mihetsika amin'ny fiara izy mba hanaovana fampielezam-peo sy dokambarotra. Ny rafitra mekanika an'ny tongotra manohana tanana dia mora sy haingana ny fiasa.
Parameter teknika momba ny vokatra
1. Haben'ny ankapobeny: 4965 * 1800 * 2680mm, izay tehina fanamafisana: 1263mm;
2. LED efijery feno loko ivelany (P6) habe: 3200 * 1920mm;
3. Rafitra fampiakarana: varingarina hydraulic nafarana avy any Italia tamin'ny kapoka 1300mm;
4. Fitaovana rafitra haino aman-jery haino aman-jery multimedia, manohana ny 4G, kapila flash USB ary endrika video mahazatra;
E-G6(6M2 Tranofiara notarihin'ny finday)
Brand JCT Haben'ny ivelany 4965mm (L) * 1800mm (W) * 2680mm (H)
Tongotra manohana 4pcs kodiarana Kodiarana matevina
Gross Trailer Mass (GTM) 1228KG notapahiny Hand / hydraulic
Haben'ny efijery 3200mm × 1920mm Dot Pitch P3 / P4 / P5 / P6
Rafitra fananganana hydraulic
Rafitra fananganana hydraulic Manakatra Range 1300mm
Rafitra mihodina hydraulic Afaka mihodina 360degree ny efijery
Haavo mifanohitra amin'ny elatra Manohitra ny haavo 8wind aorian'ny fisandratana dia atsangano ny 1300mm
Voltage fampidirana 220V dingana tokana TOSIKARATRA Output 220V
Rafitra fanaraha-maso multimédia
Player Nova Karatra fandraisana Nova
Fanamafisam-pahefana 250W * 1pc gazety 100W * 2pcs
Senser luminance Nova
Previous: 4㎡ TRAILER LED MOBILE
Manaraka: 6M MOBILE LED TRUCK-IVECO
Nitarika ny Mobile Billboard Trailer
Hitarika tranofiara finday
Fandefasana dokambarotra finday